चे ग्वेभारा को हुन् ? - Samadhan News
समाधान संवाददाता २०७८ जेठ ३१ गते १६:४०
उनका लागि भूगोल एउटै थियो, कुनै देशका सिमानाको अर्थ थिएन
गुरिल्ला योद्धा चे ग्वेभाराको जन्म इसं १४ जुन १९२८ मा पिता अर्नेस्टो ग्वेभारा लिन्च र माता सेलिया डेला सेर्नाको कोखबाट अर्जेन्टिनाको रोजारियामा भयो । उनी मध्यम वर्गका शिक्षित परिवारमा जन्मे, उनका बाबु अर्जेन्टिनाका निरंकुश शाषक पेरोका विरोधी थिए । उनी भूमिगत लडाइँ लड्ने संगठनसँग आबद्ध थिए । आमा पेरो विरोधी प्रदर्शनमा भाग लिँदा दुईपटक गिरफ्तारीमा परेकी थिइन् ।
चे सानैदेखि चिकित्सक बन्ने आकांक्षा बोकेर हिँडेका थिए । उनी अध्ययनका क्रममा चिकित्सक बने पनि । तर, मानवीय संवेदनाका धनी चे ले गरीब जनताको शोक, भोक र सन्तापबाट मर्माहत भई स्टेथेस्कोप फालेर बन्दुक समाते ।
उनले अमेरिकी साम्राज्यवादको नांगो हस्तक्षेप देखे । त्यस बेला अमेरिकामा चिकित्सक अमेरिका समर्थित तानाशाहहरुको जगजगी थियो । त्यहाँ निर्धन जनता र मजदुर माथि अमेरिका तथा विदेशी कम्पनीद्वारा भइरहेको शोषण दमनलाई उनले नजिकैबाट नियाले । त्यसैले उनले बन्दुक समातेर अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्धको क्रान्तिमा होमिए ।
उनले फिडेल क्यास्ट्रोसँग मिली बाटिस्टा शोषणका विरुद्धमा मोर्चा कसे र क्युवालाई मुक्त गरेरै छाडे । स्वयम् दमका रोगी चे कुशल चिकित्सकका साथै कुशल लडाकु पनि थिए । युद्धका क्रममा उनी घाइतेको उपचार गर्थे, भारी बोक्थे, बन्दुक बोकेर लड्थे । उनी कमान्डर थिए । चे भन्थे, ‘क्रान्तिकारी राजनेताले साधुको जीवन बिताउनुपर्छ, आडम्बरहीन भएर बाँच । समाजवादमा पुँजीवादी वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास नगर ।’
क्युबाको मुक्तिपछि उनी क्युबाको नेसनल ब्यांकको गभर्नर बने । भूमिसुधार मन्त्री भए । अनेकौं देश डुले तर सम्पत्तिका नाममा एक सरो धागो पनि जोडेनन् । उही खाकी ड्रेसमै सधैं उनी रमाए । उनी कठिन परिश्रम गर्थे, मजदुर र किसानहरुलाई प्रशिक्षित पार्थे । उनले क्युबामा क्रान्ति हुनुपूर्व नै फिडेल क्यास्ट्रोसँग सर्त राखे, ‘क्युबामा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि कुनै पनि बहानामा मलाई यहाँ रोकिनै छैन । मैले भन्नासाथ मलाई दक्षिण अमेरिकामा क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि जान दिनुपर्छ ।’ उनलाई कुनै कुनै पनि किसिमको मानसम्मान र ओहोदाले रोक्न सकेन र शर्तबमोजिम उनी बोलिभिया गए ।
२७ जनाको डफ्फासहित बोलिभियाकोजंगलमा गुरिल्लायुद्ध लड्न पुगेका चे अन्तमा एकजना विश्वासघाती किसानका कारण शत्रुको घेरामा परे । अमेरिकी सिआइ. एजेन्टमार्फत तालिमप्राप्त रेन्जरका आधा दर्जनभन्दा बढी गोलीबाट उनको हत्या भयो । सिआइए र निरंकुश शासकहरुले उनका विरुद्धमा कानुनी कारबाही चलाउने आँट गर्न सकेनन् । पछि अमेरिका स्वयंले स्वीका¥यो, चेमाथि कारबाही चलाउने आँट गर्न सकेनन् । पछि अमेरिका स्वयंले स्वीका¥यो, ‘चेमाथि मुद्दा चलाउनुको अर्थ भूकम्प निम्त्याउनु थियो ।’ त्यस्तो क्रान्तिकारीलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउनु असम्भव थियो ।’
चे एक अन्तर्राष्ट्रियवादी क्रान्तिकारी योद्धा थिए । सरलता, निरन्तरता, दृढता र उच्च मनोबल उनको परिचय बन्न पुग्यो । उनका लागि भूगोल एउटै थियो, कुनै देशका सिमानाको अर्थ थिएन । अर्जेन्टिनाको भूमिमा नयन खोल्दै, त्यहींको माटोमा शिक्षाको घाम तापी ग्वाटेमालाबाट क्रान्तिको कखरा सिकी मेक्सिकोबाट क्युबामा गई क्रान्ति सम्पन्न गर्ने महान् अन्तर्राष्ट्रियवादी चेले कंगोमा क्रान्तिको बीज छरेर बोलिभियाको क्रान्तिमा इसं ९ अक्टोवर १९६७ मा सहादत प्राप्त गरे । अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी योद्धा चेप्रति उच्च सम्मानपूर्वक हार्दिक श्रद्धाञ्जली र जनताको मुक्तिकामी आन्दोलनमा निसर्त निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।